Outlook Express हटाइएको उपकरण। Outlook Express मेटाईएको ईमेल रिकभरी
DataNumen Outlook Express Undelete हो सबै भन्दा राम्रो उपकरण मेटिएको ईमेल पुन: प्राप्ति गर्नका लागि Outlook Express। यसले DBX फाइलहरू स्क्यान गर्न उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ र सकेसम्म तपाईंको ईमेलहरू मेटाउनुहोस्।
कृपया प्रयोग गर्नुहोस् DataNumen Outlook Express Repair CORRUPT बाट ईमेलहरू पुन: प्राप्ति गर्न Outlook Express मेल फोल्डरहरू।
कृपया प्रयोग गर्नुहोस् DataNumen Outlook Repair CORRUPT आउटलुक PST फाईलहरूबाट ईमेल र अन्य वस्तुहरू पुन: प्राप्त गर्न।
किन DataNumen Outlook Express Undelete?
केवल एउटा नोट तपाईंलाई यो कुरा थाहा दिनको लागि कि माथिको कार्यक्रम एकदम राम्रो तरीकाले काम गर्यो र मैले सफलतापूर्वक एल्मलाई पनि पुनः प्राप्त गरेंost Accident००० ईमेल जुन मैले गल्तिले गरेको थिए
केवल एउटा नोट तपाईंलाई यो कुरा थाहा दिनको लागि कि माथिको कार्यक्रम एकदम राम्रो तरीकाले काम गर्यो र मैले सफलतापूर्वक एल्मलाई पनि पुनः प्राप्त गरेंost Accident००० ईमेल जुन मैले गल्तीले स्थायी रूपमा मेटाएको थिए। म यसलाई सहकर्मी र साथीहरूलाई सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन।
SA पूर्वाग्रह उद्योग लिमिटेड
मैले उन्नत पाउन भन्दा पहिले मैले अन्य तीन उत्पादनहरू प्रयास गरें Outlook Express पुन: प्राप्ति। दुई प्रोग्रामले सबै सन्देशहरू फेला पारे, जे होस्, सन्देशहरू थिए
मैले उन्नत पाउन भन्दा पहिले मैले अन्य तीन उत्पादनहरू प्रयास गरें Outlook Express पुन: प्राप्ति। दुई कार्यक्रमले सबै सन्देशहरू फेला पारे, तथापि, ती सन्देशहरूमा शरीरमा कुनै डाटा थिएन। तेस्रोले सबै अवस्थित ईमेल पनि फेला पारेन। अग्रिमको साथ पहिलो प्रयास Outlook Express पुन: प्राप्तिले परीक्षणमा सबै फाइलहरू देखायो। मैले उत्पाद खरीद गरेँ र मैले पहुँच गरेको प्रत्येक सन्देश तुरून्त पुन: प्राप्ति योग्य भयो। यो एक शानदार उत्पाद हो र निश्चित रूप मा मूल्य लायक छ।
मेरो कम्प्युटर केटा
रकवाल, TX, संयुक्त राज्य अमेरिका
खैर, उत्पादनहरू उत्कृष्ट छन्। म मान्छे को लागी धन्यवाद दिन्छु जसले यती उपयोगी उपकरणहरू विकास गरे।
तिनीहरूले वास्तवमै मेरो प्राणलाई समाधान गरे।
मोर्गानाइट ब्रासिल लट्दा
साओ पाउलो, ब्राजील
मलाई १.GB जीबी आउटलोल फाइलको साथ समस्या आएको थियो, म धेरै तनावग्रस्त थिए तर एओडीआरले मेरो मुद्दाको समाधान गर्‍यो र मेरो सबै डाटा पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्‍यो, धेरै धेरै धन्यवाद
मलाई १.GB जीबी आउटलोल फाइलको साथ समस्या आएको थियो, म धेरै तनावग्रस्त थिए तर एओडीआरले मेरो मुद्दाको समाधान गर्‍यो र मेरो सबै डाटा पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्‍यो, धेरै धेरै धन्यवाद Datanumen.com टोली जसले मेरो समस्याको लागि सही उपकरण छनौटमा मद्दत गर्‍यो।
Est। जेद्दाह साउदी अरेबिया
मुख्य सुविधाहरू DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Microsoft मा मेटाईएको ईमेलहरू पुन: प्राप्ति गर्न समर्थन गर्नुहोस् Outlook Express //5 मेल फोल्डरहरू।
भ्रष्ट मिडियामा भण्डार गरिएको डीबीएक्स फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि।
Dbx फाइलहरूको एक समूहलाई पुनः प्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ।
4GB को रूपमा ठूलो dbx फाइलहरूमा मेलहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ।
ईमेल संलग्नकहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
स्थानीय कम्प्युटरमा रिकभर हुनका लागि dbx फाइलहरू फेला पार्न र चयन गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
विन्डोज शेलको साथ एकीकृत, ताकि तपाईं सजिलैसँग विन्डोज एक्स्प्लोररको प्रस context्ग (दायाँ क्लिक) मेनूको साथ मेल फोल्डरमा ईमेलहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Outlook Express मेल फोल्डरका सबै ईमेलहरू सम्बन्धित .dbx फाइलमा भण्डारण गर्दछ। उदाहरण को लागी, Inbox.dbx फाईल ईमेल ईनबक्स मेल फोल्डर मा प्रदर्शित हुन्छ Outlook Express, Outbox.dbx फाइलमा ईमेलहरू हुन्छन् जुन आउटबक्स मेल फोल्डरमा प्रदर्शित हुन्छ, र यस्तै।
यदि तपाईं गल्तिले कुनै मेल फोल्डरमा धेरै ईमेलहरू मेटाउनुहुन्छ भने, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Outlook Express Undelete मेल फोल्डरसँग सम्बन्धित dbx फाइल स्क्यान गर्न, मेटाइएको ईमेलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सजिलैसँग आयात गर्न सकिने .eml फाइलहरूको रूपमा बचत गर्नुहोस्। Outlook Express.
मेल फोल्डरसँग सम्बन्धित dbx फाईल फेला पार्नुहोस् यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छैन भने।
नोट: dbx फाईलमा मेटाईएको ईमेलहरू पुन: प्राप्ति गर्नु अघि DataNumen Outlook Express Undeleteकृपया बन्द गर्नुहोस् Outlook Express र कुनै पनि अन्य अनुप्रयोगहरू जुन dbx फाईल परिमार्जन गर्न सक्दछन्।
Dbx फाईल चयन गर्नुहोस् जहाँ मेटाईएका ईमेलहरू पुनःप्राप्ति हुन्छन्:
तपाईं dbx फाइलनाम सिधा इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ वा क्लिक गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित, DataNumen Outlook Express Undelete xxxx_recorses डिरेक्टरीमा सबै पुन: प्राप्ति ईमेलहरू आउटपुट गर्दछ, जहाँ xxxx भ्रष्ट dbx फाईलको नाम हो। उदाहरण को लागी, Inbox.dbx फाईलका लागि, पूर्वनिर्धारित आउटपुट डाइरेक्टरी इनबॉक्स_प्राप्त हुनेछ। यदि तपाईं अर्को डाइरेक्टरी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया यसलाई अनुरूप चयन गर्नुहोस्।
तपाईं सिधै डायरेक्टरी नाम इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ वा क्लिक गर्नुहोस्
ब्राउज र निर्देशिका छनौट गर्न बटन।
टांक, DataNumen Outlook Express Undelete हुनेछtart चयनित dbx फाईलबाट हटाईएको मेलहरू पुन: प्राप्त गर्दै।
रिकभरी प्रक्रिया पछि, यदि मेटाइएको ईमेलहरू सफलतापूर्वक dbx फाईलबाट पुन: प्राप्ति भए, तपाईले यस्तै सन्देश बाकस देख्नुहुनेछ।
अब तपाईं संग एक रिकभर गरिएको सन्देश खोल्न सक्नुहुन्छ Outlook Express डबल क्लिक गरेर
आउटपुट डाइरेक्टरीमा .eml फाईलको आइकन। वा मेल फोल्डरमा भित्र बहु ​​सन्देशहरू आयात गर्नुहोस् Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete १.० नोभेम्बर १,, २०० 2.2 मा जारी भयो
DataNumen Outlook Express Undelete २.१ जुलाई,, २०० on मा जारी भयो
रिकभरी इञ्जिनको प्रदर्शन धेरै सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Outlook Express Undelete .० मार्च १ 2.0, २०१० मा जारी भयो
GUI पुन: डिजाइन गर्नुहोस्।
अनाथ वा बिग्रिएको माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज अफलाईन भण्डारण फाईलहरूबाट सन्देशहरू र अन्य आईटमहरू पुनःप्राप्ति गर्नुहोस्।ost)